फोन किन तात्छ ?, यस्ता छन् समाधानका उपाय
दिनप्रतिदिन भित्रिने अत्याधुनिक प्रविधिले स्मार्टफोन पातलिँदै छ भने डाटा प्रोसेसिङ क्षमता बढिरहेको छ । यस्तै स्क्रिन रेजोल्युशन र दृश्यको गुणस्तरसमेत उत्कृष्ट हुँदै गएको छ । प्रयोगकर्ताको बढ्दो आवश्यकता पूरा गर्दा प्रोशेसरमा अत्यधिक चाप पर्दा फोन तात्ने समस्या पैदा हुन्छ । साथै, भिडियो र मोबाइल इण्टरनेटका....
विन्डोज भिस्टा बन्द भयो
सार्वजनिक भएको १० वर्षपछि विन्डोज भिस्टालाई माइक्रोसफ्टले औपचारिक रुपमा अन्त्य गरेको छ । हाल भिस्टा प्रयोग गरिरहेका कम्प्युटर प्रयोगकर्ताले चाहीँ अझैपनि प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
माइक्रोसफ्ट कम्पनीको कम्प्युटर अपरेटिंग सिस्टम विन्डोज भिस्टालाई प्रविधि उद्योगको सबैभन्दा ठूलो फ्लप प्रडक्ट मानिन्छ । यो माइक्रोसफ्टको व्यवसायिक मार्गमा....
एनसेलले ल्यायो नयाँ वर्ष विशेष अफर
काठमाडौं । एनसेलले यस वर्ष पनि नव वर्षे २०७४ को अवसरमा रोमिङ्मा रहेको बेलामा भ्वाइस, डेटा र एसएमएस सेवा प्रयोग गर्ने सबै प्रिपेड र पोस्टपेड ग्राहकका लागि आकर्षक अफर ल्याएको छ ।
यो योजनाअन्तर्गत एनसेलले विदेश भ्रमणमा जाने आफ्ना ग्राहकका लागि दैनिक डेटा रोमिङ्....
नयाँ वर्षमा टेलिकमको अफर : ३ सयमा साढे छ जिबी डाटा
काठमाडौं । नयाँ वर्षको अवसरमा नेपाल टेलिकमले आफ्नो उपभोक्तालाई बोनसका साथै विभिन्न डाटा प्याकहरु सस्तोमा दिने भएको छ । टेलिकमले विज्ञप्ती जारी गर्दै सो अफरहरु सार्वजनिक गरेको छ । टेलिकमले जारी गरेको विज्ञप्तीअनुसार डाटा प्याकेजमा समेत बोनस दिइने टेलिकमले जनाएको छ । डाटा प्याकेजमा सुविधा....
मोवाइल सेवामा वैशाखदेखि पल्स रेट निर्धारण
काठमाण्डौ । नियामक नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले वैशाख १ गतेदेखि लागु हुने गरी मोवाइल सेवामा पल्स रेट निर्धारण गरेको छ ।प्राधिकरणले जीएसएम, सीडीएमए, ल्याण्डलाइन र अन्तराष्ट्रिय कलमा पल्स रेट निर्धारण गरेको छ ।
नेपाल टेलिकम, एनसेललगायत आधा दर्जन मोवाइल सेवा प्रदायक रहेका छन् । जीएसएम....
अब विदेशको पैसा हुलाकीमार्फत घरघरमा
काठमाडौ । के तपाईं विदेशमा हुनुहुन्छ ? या तपाईंको आफन्त ? यदि तपाईं विदेशबाट पठाएको पैसा घरमै पाउन चाहनु हुन्छ भने पर्खनोस् । तपाईंलाई हुलाक सेवा विभागले हुलाकीमार्फत घरघरमा पैसा ल्याइदिने भएको छ ।
हुलाक विभागका महानिर्देशक सुरेश अधिकारीले हुलाकीमार्फत घरघरमा पैसा पु¥याउनका लागि....
यी नम्बरको कल नउठाउन टेलिकमको आग्रह
काठमाडौं । के तपाईँको मोबाइलमा, नं. बाट कल आउँछ? आउँछ भने साबधान ! यसतो कल आयो भने तपाईँ ठगिन सक्नुहुन्छ । त्यसैले टेलिकमले शंकास्पद नम्बरहरुको कल नउठाउन ग्राहकलाई आग्रह गरेको छ ।
नेटवर्कको जिएसएम मोबाइलमा विभिन्न मुलुकको कोड नम्बरबाट शंकास्पद कल आएपछि ग्राहक शशंकित....
रातमा फेसबुक नचल्ने
बंगलादेश । बंगलादेशी समाचारपत्र डेली स्टारका अनुसार मध्यरातदेखि फेसबुक ६ घण्टासम्म बन्द गरिनेछ । खासगरी युवा तथा विद्यार्थीहरुको हितलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले यस्तो कदम चाल्न थालेको बताइएको छ ।
मन्त्रीपरिषदले टेलिकम मन्त्रालयलाई एक पत्र पठाउँदै यस्तो निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा फेसबुले....
फेसबुकमा ट्याग गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुरा
फेसबुकले तस्वीर ट्याग गर्ने अप्शन दियो भन्दैमा ट्याग गरिहाल्दा यसले धेरैजनालाई अप्ठ्यारो पारेको हुन्छ । फेसबुकमा राखिसकेपछि त्यो तस्वीर कसकसले हेर्‍यो भन्नेसमेत हेर्न भ्याइँदैन । फेसबुकमा राखिएका यस्ता तस्वीर खराब नियतका व्यक्तिले प्रयोग गर्दा अप्ठ्यारो स्थिति सृजना हुन सक्छ । त्यसैले, यस कुरामा बढी नै....
एसईईका परिक्षार्थीलाई एक रुपैयामै सिम
एनसेलले २०७३ सालको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा सहभागी भएका परीक्षार्थीहरुलाई एक रुपैयामै सिम दिने भएको छ ।
परीक्षार्थीले १ रुपैयाँमा एनसेलको प्रिपेड सिम खरिद गर्न सक्नेछन् र ३० दिनसम्म ५ वटा आफ्नो माइ फाइभ नम्बरमा अनलिमिटेड कल सेवाको फाइदा लिन सक्नेछन् ।